धन ल्याउँछु भन्दै गएका थियौ उडेर आकाशमा, कस्तो भयौ आयौ काठैको बाकसमा……. « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
धन ल्याउँछु भन्दै गएका थियौ उडेर आकाशमा, कस्तो भयौ आयौ काठैको बाकसमा…….
प्रकाशित मिति : २०७७, ५ असार शुक्रबार १८:११
काठमाडौं । खाडी मुलुकबाट चार्डर्ट विमान हुँदै नेपालीको शव काठमाडौ ल्याएको छ । शुक्रवार कतार एयरवेजको चार्टर्ड विमानमा २० वटा शव ल्याइएको थियो । कुवेतबाट जजिरा एयरले पनि २ वटा शव र दुबईबाट आएको नेपाल एअरलाइन्सले शव ल्याएको छ । शव ल्याउँदा बिमानस्थलको दृश्य भावुक बनेको थियो । शव बुझ्न मृतकका आफन्त बिमानस्थल पुगेका थिए । विदेशबाट ल्याइएका शव वैदेशिक रोजगार बोर्डले निःशुल्क घरसम्म पुुुर्याउने गर्छ तर केहीलाई यो थाहा नहुँदा शव बहान ल्याएर बिमानस्थल पुगेका थिए ।
विमानस्थलमा शव बुझ्न पुगेका मृतकका केही आफन्तले शवलाई गृहजिल्ला पुर्याउने तथा केहीले काठमाडौंमा दाहसंस्कार गर्ने बताएका छन् । लकडाउनका कारण शव ल्याउदा ढिलाई हुँदा थप कठिनाइ भएको उनीहरुले बताए ।